चुनाव हारेको माधव नेपाललाई दोस्रो पोजिसनमा राख्दा कसरी हेपियो ? : ओली (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
चुनाव हारेको माधव नेपाललाई दोस्रो पोजिसनमा राख्दा कसरी हेपियो ? : ओली (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ११ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजन नभई चोईटिएको टिप्पणी गरेका छन् । आज राति ८ बजे प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।